DHAFAR DHUNSAN: Dhaqan xumo baahsan oo kasoo korortay magaalada Muqdisho | Hadalsame Media
Home Maqaallada DHAFAR DHUNSAN: Dhaqan xumo baahsan oo kasoo korortay magaalada Muqdisho
DHAFAR DHUNSAN: Dhaqan xumo baahsan oo kasoo korortay magaalada Muqdisho
(Muqdisho) 22 Maarso 2020 – Waxa ay iskula socdaan xeeyn xeeyn, waxey ku labbisanyihiin dhar intooda badan jirkooda bannaanyahay, da’doodana waxaan ku qiyaasay 16 illaa 25 jirro.
Waxa ay halkaas yimaadaan xilliga ay dadka intooda kale ka hoyanayaan, waxa ay galaan goob u gaar ah, oo uu mamnuuc ka yahay nalka marka laga reebo kan buluugga ah iyo kan guduudan, waxaana ka daarran heeso u badan luuqado qalaad.
Marka aad mareyso albaabka goobahaas waxa ay indhahaagu qabanayaan tiro gabdho ah oo dhexda uga jiro wiilal, qaarkood laammiga ayey ku cammirtaan dheel iyagoo la raacaya heesta ka daarran gudaha.
Kama jiro xishood iyo alla ka cabsi, waxaase qof walba oo damiir leh markuu arko maankiisa kusoo dhacaayo su’aallo ay ka mid yihiin “Aaway hooyadii iyo Aabbihii dhalay, maxaa xilligaan dhigay halkaan, wiil lama dhalan miyaa, siduu noqon doonaa mustaqbalka gabdhahaan?”.
Dadka qaar ayaa kuu sheegaya in goobahaan marka aad u gasho gudaha ay jiraan qolal gaar ah oo lacag lagu galo, lacagtaasna aad ku isticmaali karto Shiishad ama cabitaan hadba key kuu goyso, waxaana ka dhex socdo baashaal ka duwan kan qeybaha kale ee goobta, mana hubo run ahaanshiyaha warkaas.
Xeebta Liido waxa ay ka mid tahay goobaha loogu jecelyahay in loo tago nasiino iyo hawo qaadasho, waxaa ku yaallo goobo u diyaarsan sheeko, shaah iyo in looga nasto shaqooyinka, waxaase dhanka kale ku arkeysaa goobo u gaar ah dad gaar ah oo ka muuqaal, labbis iyo dhaqan duwan dadka kale.
Darawal ka mid ah kuwa kaxeeya Mooto Bajaajta ayaa ii sheegay in lacagta ugu badan ay qabtaan habeenkii marka la dhaafo Lix saac, waxyaabaha cajiibka ah ee uu ila wadaagay waxaa ka mid aheyd in dhallinyaradaan intooda badan ay yaqaanaan guryahooda, habeenada qaarna ay geeyaan ayagoo cabsan oo aanan garan karin halka ay joogaan iyo meesha ay u socdaan.
Maamulka gobolka Benaadir ayaa hore u dul dhigay amarro ay ugu sheegayaan goobahaas in ay xiraan 12:00 habeenimo, balse ma dhaqan gelin taa.
W/ Q:- Nuunne Cali Xasan
Previous articleSafaaradda Somalia ee Nairobi oo waqti dheeraad ah shaqaynaysa (Hal arrin oo aan la ogayn)
Next article”Dowladdu waa ”KALI TALIS” – Siyaasadda Talyaaniga ee tan Soomaalida u eg oo kasii dareeysa xaaladda coronavirus ee dalkaa ku dhuftay! (Fadlan akhri)